Uqokelela iintsimbi namavili enze isithuthuthu | Ilisolezwe
Uqokelela iintsimbi namavili enze isithuthuthu
Iindaba / 15 June 2017, 1:08pm / Malwande Mantshule
USakhumzi nesithuthuthu sakhe azenzele ngokwakhe
USakhumzi Xana oneminyaka engamashumi amabini anesibini (22) wakuBeyele kwidolophu yaseNgcobo, unesakhono sokwakha izithuthuthu ngengqokelela yamavili kunye neentsimbi ezindala zebhayisekile kunye nezemoto.
Le yinto enqabileyo ingakumbi kumntu ongakuqeqeshelwanga oku. Kungoku nje isithuthuthu ahamba ngaso ngoku sesesithathu azenzele ngokwakhe, yaye uthi unemibono emininzi ngeentlobo zezithuthuthu anqwenela ukuzenza, nto nje ubethwa kukungabi namali nanjengoko ezinye izinto kuye kunyanzeleke ukuba zithengwe.
Oku kungabi namali kumnyanzela ukuba asebenzise i-oyile endala kwesi sithuthuthu nto leyo athi hleze yonakalise injini yakhe.
Ebalisa ngokuqala kwalo mbono, le ndoda ithi: ''Kusukela ndisemncinci ndandiye ndicele ibhayisekile ekhaya, kodwa ngenxa yemeko yokungabikho kwemali ndingakwazi ukuyifumana, ndachola ibhayisekile ekuthiwa sisiqaqaqa engenamavili, ekhwelwa kwiindawo ezihlayo kuphela, ndaqala apho ukufakela eyam imibono ndazenzela ibhayisekile eza kuhamba kuzo zonke iindawo.
Kuqala khange ndicinge ukuba ndingade ndifikelele ekwenzeni izithuthuthu kodwa ndaya ndiba nomdla nemibono qho kusisa''.
Emva kokuba efakele amavili kwisiqaqaqa sakhe, khange aphinde ayeke ukuqokelela nokulungisa yonke into eyintsimbi adibana nayo. Ukuphucula isakhono sakhe uye wazisondeza kumfo ongumkhandi weemoto ekuhlaleni, apho athi ubebuza ukuba intsimbi ethile isebenza msebenzi mni konke oku wakugcina engqondweni.
''Ndaye ndacinga ukuba njengokuba ndikwazile ukuzenzela ibhayisekile ndiyifake injini ihambe ngayo, ndinalo nolwazi ngeentsimbi ingase ndizidibanise ezi zinto zenze into enye kwalapho kuqale khona ukuba ndenze izithuthuthu.
Abantu bazincoma izithuthuthu zam, ndinqwenela ukuba ndifumane uqeqesho oluza kundinika iimpepha ndiqeshwe kwiinkampani zemoto okanye ezenza izithuthuthu,'' utsho uXana onqwenela ukuba ngumqhubi sithuthuthu kwimidyarho ngenye imini.
Zonke ezi zinto lo mfo uzenzela kwindlu enguronta kowabo, apho kwantsimbi adibana nayo ayichola ayifake kule ndawo yokusebenzela.
Utata kaSakhumzi, uMicheal Xana, akawuvali umlomo ngendlela azimisele ngayo unyana wakhe, watsho esithi uye ambone evuka nasebusuku elungisa, edibanisa iintsimbi apha naphaya de kuphume le nto ayifunayo.
Olu sapho lungathathi ntweni lunqwenela ukuba unyana walo afumane inkxaso ngoqeqesho kunye neentsimbi. Nabani na onomdla wokunceda wamkelekile ukuba afake isandla.